I-Flat Chested yeDoll ngesondo Thenga i-Boob encinci yoDoll kwi-Intanethi- ii-Urdolls
Thenga ii-Super Flat Tits zoBisi ngeDolls ngexabiso eliphantsi
Kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo zoonodoli bokwenene. Ngaba uyasithanda intombazana encinci yaseAsia isifuba esikhulu seempundu? Akukho ngxaki, ngokuqinisekileyo kukho iinketho ezininzi zolu hlobo. Uya kufumana zonke itheyibhile yesondo esisicaba fuck unokucinga ngayo yonke incasa kunye nohlahlo lwabiwo-mali. Ungafumana iflethi oonodoli baseJapan Apha. Ayinakuze ibe njengebhinqa lokwenene elikuchasayo okanye elivakalisa umnqweno ohlala ixesha elide. Kwaye akakwazi ukusetyenziselwa i-masturbation kuphela. Unako kwakhona ukuhlala nawe etafileni naphambi kweTV. Unokubukela i-anime ye-anime enesifuba esisicaba kunye.
Kukho amadoda amaninzi afuna ukufumana ama-adventures okwenene ngesondo unodoli flat esifubeni. Bakhetha iimodeli zokwenyani apha. Kwangaxeshanye, sihlala sijonge iindlela ezintsha zefashoni ezithe tyaba thanda unodoli omncinci wesifuba esicaba ukuze ube nokubonelela ngokukhula okuzinzileyo kwempahla. Ngokomgangatho, unodoli wesondo ngokwenene uvakalelwa njengomfazi wokwenene, ngoko unokuhlangabezana neemfuno zamadoda kakuhle. Ukuba ufuna ukungabinamsebenzi kodwa uphila ngothando, esi sesona sisombululo. Ngenxa yobunyani bayo obumangalisayo, ihlala isetyenziswa njengemodeli yeefoto kunye nanjengemodeli. Ukwahlukana kobomi njengoonodoli besondo isifuba esincinci esicaba iyamangalisa njenge unodoli wokwenene.
Siye saququzelela ngabom a flat esifubeni tpe unodoli itheko. Ngaba unodoli omncinci wesini webele unomtsalane kuwe? Kulo mcimbi omkhulu, ezininzi ezincinci kunye ne-loli oonodoli abancinci bebele nxiba ezona mpahla zintle ukuya epatini. Banomsebenzi wabo nobuntu babo, kodwa ngokutsho kweendaba zamva nje, bangamanenekazi angatshatanga, ngokungathi akhangela abadanisi abathandayo, ngaba ukulungele? Eli qela lenzelwe abantu abangatshatanga okanye abantu abaziva bebodwa. Uninzi lwabantu lufumene ukufudumala kwekhaya apha. Yiza ujoyine eli hlabathi linomdla kwaye awuyi kuzisola.
I-Dollhouse 168 Amehlo Amnyama Amakhulu 156CM SaSa I-Japanese Love Doll I-EVO Version TPE
I-Cherry Umlomo omncinci weQabane eliDala u-Amelia Henley ococekileyo uneentloni 163cm TPE sex Doll
Isitayile saseYurophu esineenwele ezinde zeNdebe ye-TPE yeDoll yesondo 148CM Astrid Jane
Iliso eliluhlaza leVampire TPE Doll uMartina Walpole 158CM Amabele amancinci amancinci amaLips aBomvu
Reade-155CM Isithandwa esithandekayo esithandekayo esithandekayo Iinwele ezimfutshane ze-TPE zesondo
I-Quiller-158CM i-Lady Lady Express Imincili ye-Flat Chest ye-Sex TPE
Iinwele ezimdaka ngebala zeKrisimesi eyiNtombazana engu-145CM iDarlene Morris yeQela le-TPE
I-Freckled Face Setlla Noel Slim Body 165CM Isifuba esincinci se-TPE Doll Blue Blue Eye yabantu abadala
Imilenze emide Isinqe esiLuhlaza Iilebe eziMnyama I-TPE Doll uCynthia Hood 168CM Isifuba esincinci
I-Urdolls Sexy Flat Chested Umfazi oSondo ngoQokelelo
Zeziphi iimpawu zikaNodoli we-Flat Chested Sex?
Oonodoli besondo besifuba esicaba, njengoko igama libonisa, oko kukuthi, ngokulinganayo oonodoli besini esicaba, njengoko yahlulwe koonodoli besini esikhulu sesifuba. Basenokubizwa ngokuba nguNodoli weSisifuba esiNcinci. Unodoli wesifuba esicaba umncinci, umzimba wakhe ubhetyebhetye kwaye unokuhamba ngokulula kwindawo yakho yesondo. Uyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo zesini. Unomdla kwaye unomtsalane, ugcwele umtsalane wabasetyhini, kwaye isifuba sakhe esithambileyo esisicaba sisimboli sobutsha kunye namandla.
Kutheni abantu bethanda iFlat Chest Love Dolls?
Ngexesha apho i-lordosis kunye ne-back curl ziyi-aesthetics eqhelekileyo, abaninzi abantu bacinga ukuba Unodoli we-BBW wesini zithandwa kakhulu, kodwa kwabanye abantu, unodoli wesondo osicaba wesifuba unokuba ngowabo abathandayo. Thatha inkululeko yokubuza, ngaba uyalukhumbula uthando lwakho lokuqala? Uthando lokuqala lwabafana abaninzi lunokuba nesifuba esicaba, ngoko unodoli wesifuba osicaba unokuvusa iinkumbulo zamava abo okuqala othando.
Ukwabelana ngesondo kunye nonodoli wesondo, abafazi abane-flat-chested bancinci kakhulu, isinqe esincinci kunye nemilenze emincinci lixabiso elongezelelweyo eliziswa yi-flat-chested, kwaye ezi zikwayinjongo kunye nomnqweno wamadoda. Okubaluleke kakhulu, kuncinci thanda unodoli zibhityile kakhulu kodwa zinomtsalane, zikhaphukhaphu, kwaye kulula ukuzihambisa. Umfanekiso onomtsalane kunye nomhle we isifuba sothando unodoli iya kuthakazelisa inkitha yabantu! Yintoni osathandabuza ngayo?Onodoli bokwenyani babonisa ubume obusetyhini kancinci ngelixa begxininisa ezinye iimpawu ezihexayo kunye nemimandla.Kwabo babekwe esweni kwaye banomdla, amabele amancinci ngesondo unodoli maneka.